Body matavy fanaovana kajy isan-jato, fanaovana kajy online, fiovam-po
Body matavy fanaovana kajy isan-jato dia mamela anao kajy isan-karazany masontsivana ny vatanao, toy ny tonga lafatra lanjany, tena matavy sy ny vatany matavy isan-jato, tsy misy lanjany saborany, vatana endrika karazana, basal metabolism, levitra metabolism sy ny hafa. Tsy kajy mifototra amin'ny firaisana ara-nofo, ny taona, ny lanjany, ny habeny ary ny asa vatana haavon'ny.
Firaisana Ara-nofo: Vavy Lahy
cm feet / santimetatra
Sasatra fo tahan'ny:
Kajy tahaka ny eo ho eo 3-5 fandrefesana ny isan'ny mitempo am-po isa-minitra maraina rehefa avy natory teo am-pandriana.
Andilany (in thinnest teboka):
Matetika, ity no toerana ambony noho ny foitra.
Andilany (ny hotorina hatraiza hatraiza ampahany):
Maninjitra ny tananao mitovy tamin'ny tany. Manenjana ny nanasongadina sandrinao ny 90 ambaratonga ka ny forearm dia perpendicular ny tany. Ampiasao ny ankihibe sy ny forefinger fanondrony ny ankilany ka refeso ny elanelana eo amin'ny taolana. Handrefy ny tanana Distance (teo anelanelan'ny rantsan ny ankihibe sy ny forefinger) miaraka amin'ny mizana izay ny kiho sakany.
Mamaritra ny fomba fiainako ny asa ambaratonga.
mipetrapetraka asa fahazavana asa eo ho eo ny asa asa tsara indrindra ny asa
Tanjona ny fanatanjahan-tena:
Mamaritra tanjona ny fanatanjahan-tena hetsika.
hahazo vatana tsara endrika Levitra mampitombo tanjaka fanatanjahan-tena mahabe resaka fanatanjahan-tena
Body endrika fanaovana kajy
Kajy ny tena endrika sy ny vatana karazana, ny filamatra lanjany, tena matavy sy ny vatana matavy isan-jato, ny metabolism ambaratonga sy ny hafa.